Burma Partnership » Election Laws
Posts Tagged ‘Election Laws’ (70 found)
A Message to the People of Burma
1. The National League for Democracy (NLD) was formed withacommitment to establish democratic system in Burma, which the people of Burma demanded unanimously during the 1988 nationwide pro-democracy uprising.
Since its inception, NLD has consistently tried to; (1) Establishatrue democratic government in Burma (2) Fully achieve fundamental human rights 3) Firmly lay the foundation of democracy to prevent the re-emergence ofadictatorial regime in the future (4) Perpetuate the Union with equality among all ethnic nationalities (5) Contribute for the peace in the world by improving the lives and development of the people and stability in the country of Burma […]
April 6, 2010 • By National League for Democracy • Tags: Daw Aung San Suu Kyi, Election Laws, National League for Democracy • Read more ➤
Monthly Chronology Events March 2010
An extensive monthly chronology of events researched and distributed by the Network for Democracy and Development (NDD),aBurmese political organization based on the Thai-Burma border.
These chronologies include information on the activities of the SPDC and USDA, opposition groups, armed ethnic groups, cease-fire groups, international governments and non-governmental organizations, and civilians inside Burma and along its borders.[…]
April 4, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (010-2010)
The Network for Democracy and Development (NDD),aBurmese political organization based on the Thai-Burma border, is researching and distributing weekly reports summarizing political events in Burma regarding the SPDC’s Elections. These reports include information on the activities of the SPDC and USDA, opposition groups, armed ethnic groups, cease-fire groups, border guard forces, international governments and non-governmental organizations, and civilians inside Burma.[…]
April 4, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, Network for Democracy and Development, Weekly Political Events • Read more ➤
United Nations Human Rights Council: Positive Steps on Country Situations and the Protection of Human Rights Norms
Commenting on the results of its 13th session which ended on Friday March 26th , FIDH considers the United Nations Human Rights Council has taken positive steps to respond to the human rights violations committed in Guinea and Burma […]
March 31, 2010 • By International Federation for Human Rights • Tags: Commission of Inquiry, Election Laws, International Federation for Human Rights, United Nations Human Rights Council • Read more ➤
Statement Affirming Full Support for Decision of NLD
1. We the Karen National Union (KNU) earnestly and fully support decision of the National League for Democracy (NLD) not to register asapolitical party under the unjust laws and 2008 constitution of the SPDC military regime and thus to boycott the upcoming elections.
2. The decision of NLD, which is supported by an overwhelming majority of the people of Burma, is the decision of the people […]
March 31, 2010 • By Karen National Union • Tags: 2010 Elections, Election Laws, Karen National Union, National League for Democracy • Read more ➤
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွ့ချုပ်၏ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီ၍ အပြည့်အ၀ ထောက်ခံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၏ ၂၉.၃.၂၀၁၀ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးမှ မတရားသည့် ဥပဒေများ အောက်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်ရန် ကန့်ကွက်မဲမရှိ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွင်ရှိသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍကို ရဲဝံ့တည်ကြည်စွာ ဖေါ်ပြရာရောက်သည့်အပြင်၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုက အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုအပေါ် တာဝန် ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် ပြည်သူ့ပါတီ ပီသကြောင်း ဖေါ်ပြလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။[…]
March 30, 2010 • By All Burma Monks' Alliance, 88 Generation Students, All Burma Federation of Student Unions • Tags: 2010 Elections, 88 Generation Students, All Burma Federation of Student Unions, All Burma Monks' Alliance, Burmese, Election Laws, National League for Democracy • Read more ➤
နအဖကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD မပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်သည့် အပေါ်ထောက်ခံကြိုဆိုခြင်း
၂၀၁၀ခုတွင်ကျင်းပမည့် နအဖရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မှတ်ပုံမတင်ဟု တခဲနက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသော NLD ခေါင်းဆောင်များ၏ရပ်တည်ချက်ကို ရခိုင်အမျိူးသမီးအစည်း မှကြိုဆိုထေက်ခံကြောင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ထိုထုတ်ပြန်ချက် ထဲတွင် အကယ်၍ NLD သည်ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပါက အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် မတရားသဖြင့် နှစ်ရှည်ထောင်ကျခံနေကြရသော ခေါင်းဆောင်များအပေါ်သစ္စာ ဖောက်ရာရောက်မည့်အပြင် တိုင်းပြည်ကိုပို၍နစ်နာ ဆုံးရှုံးစေမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရတရားဝင်သက်ဆိုးရှည်ရေး အတွက် တဖက်တလမ်းမှ ကူညီရာရောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောင်အနာဂတ် တွင်လည်း NLD အနေနှင့် အများအကျိုးပိုမို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အပြင် နှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခခံစားနေရသော တိုင်းရင်းသားများအားလုံး၏ဘဝ ကိုထပ်တူစာနာ၍ အားလုံးထပ်တူညီမျှသော အနာဂတ်တခုဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် သတ္တိရှိရှိချီတက်နိုင်ပါစေပာုဆန္ဒပြုလိုက်ကြောင်းစသည်များပါဝင်ပါသည်။ Statement from rakhaing women union on NLD decision for not participating in coming SPDC 2010 […]
March 30, 2010 • By Rakhaing Women Union • Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, National League for Democracy, Rakhaing Women Union • Read more ➤
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ သမိုင်းတွင်မည့် ၂၀၁၀ မတ်လ ၂၉ ဆုံးဖြတ်ချက်အား အကြွင်းမဲ့ထောက်ခံကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
စစ်မှန်သော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစံနစ်တခုအောက်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများအပါအဝင် တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူအားလုံး၏ အကျိုး စီးပွားကို ထိရောက်စွာ ထမ်းဆောင်လိုသူတိုင်း တရားမျှတလွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲများမှတဆင့် ပြည်သူတို့က ယုံကြည်စွာ အပ်နှင်းသည့် တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်(သို့) အချုပ်အခြာအာဏာရရှိရန် လိုအပ်သည်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) နှင့်တကွ ဒီမိုကရေစီယုံကြည်သည့် ပါတီတိုင်း ချွင်းချက်မရှိ လက်ခံကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အပြည့်အဝ ယုံကြည်သည်။[…]
March 30, 2010 • By National Coalition Government of the Union of Burma • Tags: 2010 Elections, Election Laws, National Coalition Government of the Union of Burma, National League for Democracy • Read more ➤
Indonesia’s foreign minister should stress to Burma’s military government that drastic reforms are needed if the elections this year are to be credible, Human Rights Watch said inaletter today to Foreign Minister Marty Natalegawa, who is visiting Burma on March 30 […]
March 28, 2010 • By Human Rights Watch • Tags: 2010 Elections, Election Laws, Human Rights Watch, Indonesia • Read more ➤